အခမဲ့သင်ကြားပေးမည့် စင်ကာပူ-မြန်မာ သက်မွေးသင်တန်းကျောင်းမှ လျှောက်လွှာခေါ်ယူပြီ
(၁) တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီး အသက် (၁၆) နှစ်နှင့်အထက်ရှိသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
(၂) သင်တန်းကာလ (၆) လတက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းပြီးဆုံးကြောင်း အသိအမှတ်ပြု အောင်လက်မှတ်(Certificate) ရရှိပါမည်။
(၃) ခေတ်မီ Lab ပစ္စည်းများ အသုံးပြု၍ စာတွေ့လက်တွေ့ သင်ကြားပို့ချပေးပါမည်။
(၄) Engineering & Technology နှင့် Hospitality & Tourism ဘာသာရပ်များအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်သော သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ မွေးထုတ်ပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
(၅) လျှောက်လွှာနှင့်အတူ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်ကြောင်း အောင်လက်မှတ်မိတ္တူ၊ အမှတ်စာရင်းမိတ္တူ၊ ကျောင်းသား၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူတို့အား ပူးတွဲလျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။
(၆) လျှောက်ထားသည့်အချိန်တွင် စာမေးပွဲအောင်မြင်ကြောင်း အောင်လက်မှတ်မူရင်း၊ အမှတ်စာရင်းမူရင်း၊ ကျောင်းသား၏ မှတ်ပုံတင်မူရင်းတို့အား တစ်ပါတည်း တင်ပြနိုင်ရမည်။ (တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန်ဖြစ်ပါသည်။) မှတ်ပုံတင်မရှိပါက (၃) လတွင်း ပြုလုပ်ထားသော ရပ်ကွက်၊ ရဲစခန်းထောက်ခံစာမူရင်းနှင့်တကွ ပူးတွဲလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
(၇) လျှောက်ထားသူများ Interview ဖြေဆိုရပါမည်။
(၈) Hospitality & Tourism ဘာသာရပ်လျှောက်ထားသူများ ပတ်ပို့(စ်)ဓာတ်ပုံ (၁) ပုံ ယူလာရပါမည်။
Courses for Hospitality & Tourism
Courses for Engineering & Technology
2. Electronic (Computer Networking)
3. Residential Air-Conditioning
4. Building Fixtures & Equipment
5. Mechatronics (Basic Servicing)
6. General Welding
သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည့်ရက် - ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်
သင်တန်းနေရာ - SMVTI သက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း အမှတ် (၁၂၃)၊ နတ်မောက်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဆက်သွယ်စုံစမ်းရန် - ဖုန်း ၀၉-၇၈၁၀၀၂၅၇၂ (General Office)
(လျှောက်ထားခြင်းကို ၆.၈.၂၀၁၈ ရက်မှ ၁၇.၈.၂၀၁၈ ရက်အထိ နံနက် ၉း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၄း၀၀နာရီအတွင်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။)
မှတ်ချက်။ ။ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များ ပိတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
SingaporeMyanmar Vocational School
အခမဲ့သင်ကြားပေးမည့် စင်ကာပူ-မြန်မာ သက်မွေးသင်တန်းကျောင်းမှ လျှောက်လွှာခေါ်ယူ
ထောက်ပံ့ကြေးပေး၍ သင်ကြားမည့် အထည်စစ်(QC)သင်တန်း စက်တင်ဘာတွင် ဖွင့်မည်
More in this category: « ၁၀တန်းအောင်မြင်သူများ အခမဲ့ တက်ရောက်နိုင်တဲ့ စင်ကာပူ-မြန်မာသက်မွေး သင်တန်းကျောင်း လျှောက်ထားနိုင်	အခမဲ့သင်ကြားပေးမည့် စင်ကာပူ-မြန်မာ သက်မွေးသင်တန်းကျောင်း »
စင်ကာပူသံရုံးနှင့် မြန်မာအစိုးရတို့ ပူးပေါင်းပြီး ဖွင့်လှစ်သည့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာ (အခမဲ့)သင်တန်းများ